प्रदेश नं. ५ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
दाङको प्रदेशसभा सदस्यमा नेकपाकी विमला विजयी
घोराही । दाङ क्षेत्रनम्बर ३ (ख) बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की उम्मेदवार विमला खत्री प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् ।
उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका केशव आचार्यलाई ५ हजार बढी मत अन्तरले हराएकी हुन् ।
ओलीले प्रदेशसभा २४ हजार २ सय…
कास्की–२ मा विद्याको अग्रता बढेको बढ्यै
पोखरा । कास्की २ को मतगणना जारी छ । प्रारम्भिक गणनामा अग्रता लिएकी विद्या भट्टराईले अग्रता बढाउँदै लगेकी छन् । १ हजार १ सयले सुरुमा लिड गरेकी उनले अग्रता ४ हजार ५ सय ८३ पुर्याएकी छन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले लिए गोपनीयताको सपथ
बुटवल । प्रदेश ५ को लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डिलाराम भट्टराईले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् ।
मंगलबार आयोजित समारोहमा भट्टराईलाई उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलले सपथ गराएका हुन् ।
समारोहमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायतको…
प्रदेश ५ का निजी शिक्षण संस्थामा विप्लव समूहको कालो ब्यानर
बुटवल । विप्लव समूहको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)ले प्रदेश ५ का करिब आधा दर्जन शिक्षण संस्थाहरुमा एकसाथ कालो ब्यानर राखेका छन् ।
रुपन्देही, नवलपुर, अर्घाखाँचीका कलेज तथा विद्यालयहरुमा एकसाथ कालो ब्यानर टाँगिएको हो । स्कुल तथा कलेज सञ्चालकको फोटोयुक्त कालो…
बुटवल । प्रदेश ५ मा करिब १६ सय कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । प्रदेशको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी ३ हजार ९६ मध्ये हाल १५ सय कर्मचारीमात्रै कार्यरत रहेका छन् । बाँकी १५ सय ९६ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।
अब हामीले पराजित गर्नुपर्ने कुनै शक्ति छैन : शंकर पोखरेल
बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अब नेपालमा पराजित गर्नुपर्ने कुनै शक्ति नभएको दावी गरेका छन् ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बुटवल मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘हिजो राजतन्त्र फाल्न र परिवर्तनका लागि धेरै त्याग र योगदान गर्‍यौं,…
प्रदेश ५ मा चुनौती बन्दै सवारी दुर्घटना : ८ महिनामा ३८४ को मृत्यु
बुटवल । असोज २० गते बाँके जिल्ला राप्ती सोनारी गाउँपालिका-९ मुगुवाखोला नजिक पूर्वपश्चिम राजमार्गमा दाङबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको रा१ख १६६२ नंंम्बरको हाइस र विपरीत दिशाबाट आएको लु१ख ७७२९ नं.को ट्रक एक आपसमा ठोक्किदा ६ जनाको मृत्यु भयो ।…
बुटवल । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको पार्टीमाथि निषेधको राजनीति गरेको बताएका छन् । प्रेस युनियन रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँणले, सरकारले विप्लवलाई निषेधको राजनीति गरिहाल्ने अवस्था नरहेको…
बुटवल । अधिकांश प्रदेशहरुको स्थायी राजधानी र नामकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभालाई ठुलो चुनौति भएको छ ।
प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुङ्गो लगाउन नसकेको…
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र अमरपथस्थित वडा नं ४ शङ्करप्लाजामा लागेको आगलागीबाट सो भवनमा सञ्चालित फेन्सी पसलको करीब रु एक करोडको क्षति भएको छ ।
आगलागीबाट सो भवनमा सञ्चालित बिन्दवासिनी फेन्सी जलेर पूर्णरुपले क्षति भएकाले प्रारम्भिक अनुमानमा…